पालो नेपाली कांग्रेसको – Sourya Online
पालो नेपाली कांग्रेसको
सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १४ गते ०:१७ मा प्रकाशित
आफूलाई नेपालको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक मेलमिलापको स्थिति देखा परेको छ । जहिले पनि आन्तरिक कलहमै रुमलिइरहेको यो पार्टी अहिले त्यो कलहबाट मुक्त हुन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, पद र प्रतिष्ठालाई नै केन्द्र भागमा राखेर गरिने लडाइँ भने यो दलमा शिथिल बनिसकेको अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धति आफ्नो मूलमन्त्र भएको बताउने यो दलका नेताले पूर्णरूपमा त्यो पद्धति अँगाल्न सकेको पाइँदैन । एकातिर सभापति नै सर्वेसर्वा हुने प्रचलन कायम गरिएको छ भने अर्कातिर बहुमतको निर्णय नमान्ने परिपार्टी पनि स्थापित गरिएको छ । जसले गर्दा कांग्रेसभित्र रहेको कलह साम्य हुन सकेको छैन । यो कलह मन्त्रिपरिषद् विघटन वा परिवर्तन हुँदा सतहमा देखा परेर छताछुल्ल हुने गरेको छ । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर नेपाली कांग्रेस देखिने गरी नै दुई खेमामा विभाजित रहेको पाइन्छ । जसलाई कोइराला खेमा र देउवा खेमा भन्ने गरिएको छ । यदि, यी दुई खेमा एउटै भएर गतिवान् बन्ने हो भने मुलुकको वर्तमान संकटपूर्ण राजनीतिलाई सहज अवतरण गराउने बाटो खुल्न सक्थ्यो । तर, यस दलभित्र रहेको सत्तास्वार्थले राजनीतिमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसर्थ, वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व लिन चाहेको हो भने पहिला आफूभित्र रहेको बेमेल अवस्थाबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन समयसीमा तोकेर दलहरूलाई आह्वान गरेपछि सरकारको नेतृत्व लिन नेपाली कांग्रेस अग्रसर भएको देखिन्छ । यो कांग्रेसको उचित अग्रसरता पनि हो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो र तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) ले दुई/दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसके । चक्रीय प्रणाली नै अपनाउने हो भने पनि पालो नेपाली कांग्रेसकै हो । अप्ठयारो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको इतिहास पनि छ । तर, जबसम्म अन्तरपार्टी कलह मिल्दैन तबसम्म यो पर्टीे नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । किनभने अहिले पनि यस दलभित्र एउटाले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । पार्टीभित्रका विग्रह र विसंगतिलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने मुलुकको नेतृत्व गर्न यो पार्टी सक्षम हुनेछ । अहिले सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई समर्थन गर्ने जनाएर वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले थोरै भए पनि राजनीतिक सुझबुझ देखाएका छन् । तर, यही नै काफी हुँदैन । उनले कोइरालाका पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल र भेटघाट गर्न थाल्नुपर्छ । यसले मात्र देउवाले पार्टीका लागि केही गरेको सन्देश दिनेछ ।
राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले राष्ट्र निकै संकटपूर्ण अवस्थामा छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ‘बरु गोली खान तयार छु, बालुवाटार छाड्दिनँ’ भनिरहेका छन् यता राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेरै सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्था छ । सबैले सोचेका छन्, अब राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएका नाताले निर्वाचनलगायत अन्य विषयमा सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले काम गर्नसक्छ भन्ने विश्वास पनि रहेको पाइन्छ । तर, आफूभित्रको किचलो र खुट्टा तानातानको अभ्यास यसले रोक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो, यो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो मुलुकमा वामपक्षीय सोचको बोलवाला छ । त्यो वामशक्तिलाई नकारेर कोही पनि अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, वर्तमान जटिल परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले समग्र वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरेर आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ । देश, दुनियाँले देखेको र बुझेको कुरा के हो भने एमाओवादीले किचलो नगरी नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पनुपर्छ । साथै, तुरुन्त प्रधानमन्त्रीको नाम दिन नेपाली कांग्रेस तयार रहनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले निर्वाचन गराउने एक मात्र कामको जिम्मा लिनुपर्छ । यसले मात्र राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउनेछ ।
दलितमाथि थप अन्याय
संकटमाथि थप संकट
सत्ताधारीले बुझ्नुपर्ने कुरा
कांग्रेसमा अशोभनीय चरित्र
भारतीय सेनामा नेपाली महिला भर्ती
गोकर्णेश्वरमा टिप्परको ठक्करबाट एकजनाकाे ज्यान गयो
हेलचेक्राइँले जाँदैछ ज्यान
संकटमा सिद्धनाथ महादेव मन्दिर
सल्यानका ४ वटा स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक भएन
धनपालथान र कटहरी गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै मालपोत चन्द्रनिगापुरबाट कारोबार सुरु